Dahalo valo lahy miampy lehilahy iray mpiray tendro amin’izy ireo no tra-tehaky ny Kalôny sy ny Kartie mobila nanao fisafoana amin’ny alina raha nikasa hangalatra omby miisa 75 tao Ikelivondraky, Kaominina Ambatolahy, Distrika Ihosy ny alin’ny alahady 20 desambra 2020. Nitondra basim-borona sy zava-maranitra ireto olon-dratsy ireto tamin’izany. Efa eo ampelan-tanan’ny Zandary avokoa izy sivy lahy ireo, atao famotorana mialoha ny hanolorana azy ireo ny Fampanoavana ao Ihosy. (Jereo Sary Tohiny)
Lehilahy iray fantatra amin’ny solon’anarana hoe: “Lin” no voasambotra tao Ambodimanga Sahavaviana Kaominina Maromitety, Distrika Vavatenina raha nikasa hanolana zazavavy kely 12 taona, ny tolakandron’ny 16 desambra 2020. Norahonan’i Lin hovonoina tamin’ny “coupe-coupe” raha tsy manaiky ny filan-dratsiny. Ny anadahin’ilay zazavavy izay niara-dalana taminy no niezaka nitsoaka ka nampandre ny olona ny zava-mitranga. Efa niborotsaka ny patalohan’i Lin no tratran’ny olona tao anaty kirihitr’ala handeha hanolana ilay zazavavy izy. Notazomin’ny Zandary avy hatrany ilay mpanolana natao famotorana, ary natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Fenoarivo Atsinanana.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona tamin’ny lalam-pirenena faha-5 PK 27+100 tao Antanimenakely na Vohitsara Kaominina Antetezambaro, Distrika Toamasina II ny 17 desambra 2020, fiandohan’ny tolakandro. Fiara 4x4 iray hiazo an’i Foulpointe no nifandona tamin’ny bisikileta izay sendra nihodina an-dalana nanao tampody fohy, tsy nanampo ny fiara ho avy. Tsy azo nihodivirana ny fifandonana, ary maty tsy tra-drano ilay lehilahy, 41 taona, mpitondra bisikileta.Nisy fahasimbana fa kelikely ihany ilay fiara. Efa nalain’ny fianakaviany ny faty taorian’ny fanamarinana nataon’ny Zandary sy ny mpiasan’ny fahasalamana. (Jereo Sary Tohiny)
Notafihin’ny dahalo miisa efatra mitondra basim-borona tao Ambalakazaha Kaominina ambanivohitra Bekopaka, Disitrika Antsalova, ny 17 Desambra tokony ho tamin’ny sivy ora sy sasany alina. Nikasa saika haka omby miisa 08, an’ny fianakaviana iray tao an-tanàna ireo dahalo ireo.Nandritra ny fanafihana dia voatifitra ny zazakely iray, 02 taona, zanaky ny tompon’omby ka naratra teo amin’ny lohany, nandalovany bala vokatry ny tifitra izay nahazo azy, ary naratra ihany koa teo aminy feny havanana. Vaky nandositra ireo dahalo taorian’izay, tsy nisy lasa ireo omby ireo. Nentina namonjy CSBII ao an-toerana ilay zaza naratra ka efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy, ary tsy misy atahorana ny ainy. Manohy ny fikarohana ireo dahalo ny Zandary.
vendredi, 18 décembre 2020 20:13
Fanjakana-Isandra : Notifiriny ny vadiny vao tera-bao, avy eo nitifi-tena ilay Zandary
Zandary iray, milanja galona kilasy faharoa, no nahavita nitifitra tamin’ny basy teny aminy, ny vady andefimandriny izay vao tera-bao iray volana, ny harivan’ny 17 desambra 2020. Maty tsy tra-drano teo ambony fandriana ilay ramatoa. Maty nitifi-tena ilay zandary taorian’izay. Naratra, nipitihan’ny bala teo amin’ny sandriny havia ny zanak’izy ireo, vavikely 6 taona. Miasa ao amin’ny brigady Fanjakana, Distrika Isandra, Faritra Matsiatra Ambony ity zandary nahavanon-doza ity. Isan’ireo zandary hanatanterana fisafoana amin’ny alina, ho fitandroana ny fandriampahalemana, izy io andro io. Toy ireo namany, dia mitondra basy izy. Taorian’ny famoahana basy tao ampiasana dia voalaza fa nitsoriaka kely nody namonjy ny trano misy azy izy, izay ao anaty tobin’ny zandary ihany. Tampoka teo dia feom-basy no henon’ireo namany. Rehefa nozahana dia olona efa mitsirara mihoson-drà no novantanin’ireo namany.
vendredi, 18 décembre 2020 12:09
Fanodinkodinana zaza tsy ampy taona : Tovolahy zanaka pastera, voasambotra ary hatolotra ny Fitsarana
Tovolahy telo, zanaka pastera ny iray, ary efa samy manana anton’asa avokoa no voarohirohy ho nanodinkodina zaza tsy ampy taona. Telo vavy, 15 taona ny roa, ary 17 taona ny fahatelo, no sady tsy hita any am-pianaran’izy ireo no tsy nody an-tranon’ny ray aman-dreniny avy. Nanao fitaraina teny anivon’ny Polisim-pirenena ireto farany noho io zava-misy io.Nanokatra fanadihadiana ny Polisy. Nanomboka tamin’ny septambra 2020 ny fikarohana ka ny 17 desambra 2020 no tratra avokoa ireo tovolahy telo nisitrihan’izy telo vavy, ary voarohirohy nanodinkodina zazavavy tsy ampy taona. Mitondra vohoka efa-bolana ilay tovovavy 17 taona, tamin’ny nahitana azy ireo.Hatolotra ny Fampanoavana ao Ambositra anio zoma 18 desambra 2020 izy telo lahy ireo.
jeudi, 17 décembre 2020 09:31
Menagisy- Sambava : Roalahy latsaka tao anaty lavadrano, namoy ny ainy ny iray
Fanadiovana lavadrano no nitera-doza tao Menagisy, Fokontany iray ao anatin’ny Kaominina ambonivohitr’i Sambava. Lehilahy iray no latsaka tao anaty lavadrano manana halalina 20 metatra raha sendra nanadio azy io. Nikoropaka namonjy azy ny rahalahiny raha nahita ny loza, kanjo latsaka tany ihany koa. Nanao ny ezaka rehetra ny Fokonolona nanavotana azy roalahy. Tafavoaka avy tao anaty lavadrano, tafakatra an-tanety ary nifamonjena nentina tao amin’ny hopitaly. Nanao ny ezaka rehefa tamin’ny fameloman’aina ny mpitsabo, fa tsy tana ny ain’ilay lehilahy latsaka voalohany. Efa nalain’ny fianakaviany ny faty taorian’ny fanamarinana nataon’ny mpitsabo.Nanokatra fanadihadiana ny Zandary avy amin’ny brigady Sambava noho ity loza namoizana ain’olona ity. (Jereo Sary Tohiny)